ကြေးမုံဂျီးအမျိုး တရုတ်ပြည် တိန်အင်န်မင်ရင်ပြင် လူသတ်ပွဲ (၁၉၈၉ခုနှစ် ဇွန်လ၃-၄ရက်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » ကြေးမုံဂျီးအမျိုး တရုတ်ပြည် တိန်အင်န်မင်ရင်ပြင် လူသတ်ပွဲ (၁၉၈၉ခုနှစ် ဇွန်လ၃-၄ရက်)
ကြေးမုံဂျီးအမျိုး တရုတ်ပြည် တိန်အင်န်မင်ရင်ပြင် လူသတ်ပွဲ (၁၉၈၉ခုနှစ် ဇွန်လ၃-၄ရက်)
Posted by ဦးေၾကာင္ၾကီး on Nov 20, 2017 in Best Web Awards, History |3comments
(သမိုင်းသင်တာ မအအောင် လို့ ဆရာကြီး ဒေါက်တာ သန်းထွန်း ပြောစကား မှတ်ဖူးပါသည်။ စာဖတ်သူများလည်း ကူမြူနစ် မဟုတ်တရုတ် ကြေးမုံဂျီးတို့ ခေတ်သစ် နိုင်ငံရေးသမိုင်းထံမှ သိကောင်းစရာ တခုခု ရစေရန် ရည်သန်လျက် ကြိုးစား ဘာသာပြန်ထားသည်။ ဘာသာပြန် ပရို မဟုတ်သဖြင့် အမှားအယွင်း အကျအပေါက်များ ရှိလျင် ကိုယ့်ဖာသာ ဖြည့်ဖတ် နားလည်ပေးကြပါ။) …………………………………. ……………………..
တိန်အင်န်မင်ရင်ပြင် လူသတ်ပွဲ ၁၉၈၉ (တိန်အင်န်မင်မှာ ဘာတွေ တကယ်ဖြစ်ခဲ့သလဲ…)
အနောက်ကဗာတွင် လူအများ တိန်အင်န်မင်ရင်ပြင် လူသတ်ပွဲကို ဒီလို မှတ်သားကြသည်……
၁။ ၁၉၈၉ ဇွန်လတွင် ဖြစ်ပွားသော ဒီမိုကရေစီရေး ကျောင်းသား ဆန်ဒပြပွဲ ဖြစ်သည်။
၂။ တရုတ်အစိုးရမှ စစ်တပ် နှင့် တင့်ကားများ တိန်အင်န်မင်သို့ စေလွှတ်ခဲ့သည်။
၃။ ဆန်ဒပြ ကျောင်းသားများစွာ ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံခဲ့ရသည်။
၎င်း အချက်များမှာ တိန်အင်န်မင်ရင်ပြင်တဝိုက် အဖြစ်အပျက်များ ပုံဖေါ်ရာတွင် သာမန်အားဖြင့် အနှစ်သာရပိုင်း မှန်ကန်သည်။ သို့သော် အရေးအခင်းမှာ ထိုအချက်များ ပြောသည်ထက် အချိန်အများကြီး ရှည်ကြာကာ ပိုမို ကသောင်းကနင်း ဆန်ခဲ့သည်။ ကွယ်လွန်သူ ကူမြူနစ်ပါတီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှုးဟောင်း ဟူယောင်ပန်းအား လူထု လွမ်းဆွတ်သတိရပွဲ ပြုလုပ်စဉ် ၁၉၈၉ ဧပြီလတွင် ကန့်ကွက်ဆန်ဒပြမှုများ ပေါ်ပေါက်သည်။ အစိုးရ ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်တဦး၏ အသုဘမှ ဒီမိုကရေစီရေး ဆန်ဒပြပွဲ နှင့် ပြသနာ မီးပွားတောက်လောင်ရန်မှာ တွေးမထင်ထားသော အရာဖြစ်သည်။ ဘာပဲပြောပြော နှစ်လနီးပါးအကြာ တိန်အင်န်မင်ရင်ပြင် ဆန်ဒပြပွဲ နှင့် လူသတ်ပွဲ ဖြစ်ပွားသည့်အခါ လူပေါင်း ၂၅ဝ မှ ၇၀၀ဝ အကြား သေဆုံးသည်။ ပေကျင်းမြို့တော် နွေရာသီမှာ ဘာတွေတကယ် ဖြစ်ခဲ့သနည်း။ ။။။။။
၁၉၈ဝနှစ်များတွင် ဂန်နဝင် မော်ဝါဒ မအောင်မြင်ကြောင်း တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီ ခေါင်းဆောင်များ သိလာသည်။ အလျင်စလို စက်မှုခေတ်ပြောင်းရန် နှင့် စုပေါင်းလယ်ယာဘုံ စနစ်ထူထောင်သည့် “မဟာခုန်ပျံကျော်လွှား” စီမံကိန်းအတွင်း အစာရေဆာ ငတ်မွတ်မှုကြောင့် လူ သန်းဆယ်ပေါင်းများစွာ သေဆုံးသည်။ တဖန် ဆယ်ကျော်သက်ခလေးအရွယ် တပ်နီအစောင့်များမှ တမြေထဲနေ တရေထဲသောက် သိန်းသန်းချီသော ကိုယ့်နိုင်ငံသား အခြင်းခြင်းကိုပင် အရှက်ခွဲ၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်၊ သတ်ဖြတ်မှု နှင့် ရံဖန်ရံခါ ဇာတ်တူသားစား အကြမ်းဖက် ဖျက်ဆီးသော ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေး ဘီလူးသဘက် (၁၉၆၆ -၇၆) လက်တွင်း တရုတ်နိုင်ငံ သက်ဆင်းရပြန်သည်။ ။။။။။။
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် အဖိုးမဖြတ်နိုင်သည့် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ ဖျက်ဆီးခံရသည်၊ အစဉ်အလာ တရုတ် အနုပညာ လက်ရာများ နှင့် ဘာသာတရား ပျက်သုန်းကုန်သည်။ အာဏာ တည်မြဲရေး အပြောင်းအလဲများ လုပ်ရန်လိုကြောင်း တရုတ် ခေါင်းဆောင်ပိုင်း သိသော်ငြား ရေရေရာရာ မရှိခဲ့ချေ။ အရှိန်အဟုန်နှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လိုလားသူများ ဆော်ဩသည့် ဈေးကွက် စီးပွားရေး၊ တရုတ် ပြည်သူများအား ကျယ်ပြန့်သော ပုဂ်လိကဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ခွင့်ပေးရေးနှင့် အချီးနှီးမဲ့ ဗဟိုမှတင်းကြပ်စွာ အမိန့်ပေး စီးပွားရေး၊ လူထုအား တင်းကြပ်စွာ ဆက်လက် အုပ်ထိန်းရေး လုပ်လိုသူများအကြား ကူမြူနစ်ပါတီအတွင်း ခေါင်းဆောင်ပိုင်း ကွဲနေသည်။ ။။။။။
ခေါင်းဆောင်ပိုင်း သွားရန်လမ်း ဝေဝါးခိုက် အာဏာရှင်စနစ် အကြောက်တရား၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အာသီသ တို့ အားပြိုင်ရင်း တရုတ်ပြည်သူများ ယခင် မလုပ်ဖူးသည့် လမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြသည်။ လွန်ခဲ့သည့် အနှစ်၂ဝ အစိုးရကြောင့် ဖြစ်သော ဝမ်းနည်းဖွယ် ဖြစ်ရပ်များက အပြောင်းအလဲကို ဆာလောင်မွတ်သိပ်စေသော်လဲ အတိုက်အခံပြုမှုအား နင်းခြေဖျက်ဆီးရန် သံလက်သီးစွပ်ထားသော ပေကျင်း ခေါင်ဆောင်ပိုင်း၏ အသင့်အမြဲ ရှိမှုကိုလည်း သိနေသည်။ လေဘယ်ဖက် တိုက်မလဲ တရုတ်လူထု စောင့်ကြည့်ကာနေသည်။ ။။။။။
မီးပွားစတင်ခြင်း – ဟူရောင်ပန်း အောင့်မေ့သတိရပွဲ…..
ဟူယောင်ပန်းမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဝါဒီ တဦးဖြစ်ပြီး ၁၉၈ဝ မှ ၁၉၈ရ အထိ ကူမြူနစ်ပါတီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှုး တာဝန်ယူခဲ့သည်။ ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေးတွင် တရားမဲ့ ပြုကျင့်ခံရသူများအား ပြန်လည်နေရာချထားရေး၊ တိဘက်အတွက် ပိုမိုကြီးမားသော ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၊ ဂျပန်နှင့် ပြန်လည် ဆက်ဆံရေး၊ လူမှုရေး နှင့် စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး သူ ဆော်ဩခဲ့သည်။ အကျိုးဆက်မှာ ၁၉၈ရ ဇန်နဝါရီတွင် သဘောထား တင်းမာသူများမှ သူ့အား ရာထူးမှ ထုတ်ပစ်ပြီး ဘူဇွာအတွေးအခေါ်ရှိသည် စွပ်စွဲကာ လူထုရှေ့မှောက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဝေဖန်ဆန်းစစ် ခိုင်းခဲ့သည်။ ။။။။။
ပေါ်ထွက်လာသည့် စွဲချက်တခုမှာ ၁၉၈၆ နှောင်းပိုင်းကာလ ကျောင်းသား ကန့်ကွက်ဆန်ဒပြမှုများ ကျယ်ပြန့်စေရန် (အနဲဆုံးတော့ ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း) အားပေးအားမြောက် ၎င်း ပြုခဲ့ကြောင်း ဖြစ်သည်။ ပညာတတ်များ၏ နိုင်ငံရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု ငြင်းခုံမှုများကို တရုတ်အစိုးရ သည်းခံသင့်သည် ယုံကြည်လျက် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှုး တာဝန်ယူစဉ် အဆိုပါ ကန့်ကွက် ဆန်ဒပြမှုများအား နှိပ်ကွပ်ရန် သူ ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ။။။။။။
ပြစ်ဒဏ်ချ ရာထူးမှ အထုတ်ခံရပြီးနောက် များမကြာမှီ ဟူယောင်ပန်း ၁၉၈၉ ဧပြီ ၁၅ တွင် နှလုံးရောဂါနှင့် ကွယ်လွန်သည်။ အာဏာပိုင်များ သူ့နာရေးကို အကျဉ်းချုပ်သာ ဖေါ်ပြပြီး အစိုးရမှ ပထမတွင် ၎င်းအား နိုင်ငံတော် ဈာပန ကျင်းပရန် စီစဉ်မထားခဲ့ပေ။ ပေကျင်းမြိုတော် တဝှမ်းရှိ တက်ကသိုလ်ကျောင်းသားများမှ တုံ့ပြန်သည့်အနေနှင့် အစိုးရ ခွင့်ပြုလက်ခံသော ကြွေးကြော်သံများ ဟစ်အော်ခြင်း၊ ဟူ၏နာမည် ဂုဏ်သိပ်ခါ ပြန်ဆယ်ပေးရန် တိန်အင်န်မင်ရင်ပြင်သို့ ချီတက်တောင်းဆိုသည်။ ။။။။။
ဖိအားများကြောင့် တရုတ် အစိုးရမှ ဟူအတွက် နိုင်ငံတော် ဈာပန ဂုဏ်ပြုရန် ဆုံးဖြတ်ရသည်။ သို့သော် ပြည်သူ့ မဟာခန်းမဆောင်တွင် တွေ့ဆုံရန် သုံးရက်ကြာ စောင့်ဆိုင်းနေသော ကျောင်းသား ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံရန် ဧပြီ ၁၉တွင် အစိုးရ အာဏာပိုင်များ ငြင်းပယ်လိုက်သည်။ ထိုအခြင်းအရာမှာ အစိုးရ၏ ကြီးမားသော ပထမ အမှား ဖြစ်ကြောင်း သိလာရတော့သည်။ ။။။။။
ဧပြီ၂၂၊ မျိုသိပ်ချုပ်တည်း ထားရသည့် ဟူအတွက် အောက်မေ့ဖွယ် အခမ်းအနားသို့ အင်အားတသိန်းပါသော ကျောင်းသား ဆန်ဒပြ လူအုပ်ကြီး တက်ရောက်သည်။ အစိုးရအဖွဲ့အတွင်း သဘောထား တင်းမာသူများ ဆန်ဒပြမှုကြောင့် အကြီးအကျယ် စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်ကုန်သော်လည်း အထွေထွေ အတွင်းရေးမှုး ကျောက်ကျိယန်မှ ဈာပန အခမ်းအနား ပြီးလျင် ကျောင်းသားများ လူစုကွဲသွားမည် ယုံကြည်သည်။ သူ့ကိုယ်သူ ယုံကြည်လွန်းရွေ့ မြောက်ကိုရီးယားတွင် ထိပ်သီး စည်းဝေးပွဲ တက်ရန် တပတ်ကြာ ခရီးပင် ထွက်ခဲ့သေးသည်။ ။။။။။
တောင်းဆိုချက်များအား အစိုးရမှ လက်ခံရန် ငြင်းပယ်ခံရရွေ့ ကျောင်းသားများ ဒေါသူပုန်ထကုန်ပြီး သူတို့ ဆန်ဒပြပွဲအား ဖိနှိပ်ဖြိုခွဲ တုံ့ပြန်ခြင်း မရှိမှုကြောင့် ရဲတင်းလာသည်။ တကယ်လည်း ပါတီ အနေဖြင့် ထိုအချိန်အထိ သူတို့အား ဖြိုခွဲချေမှုန်းခြင်းမှ စောင့်စည်းထားပြီး ဟူယောင်ပန်းအတွက် သင့်တော်သည့် ဈာပန ကျင်းပပေးရေး တောင်းဆိုချက်ကိုပင် လိုက်လျောခဲ့သည်။ ကျောင်းသားများ ဆက်လက် ဆန်ဒပြကြရင်း သူတို့ ကြွေးကြော်သံများ ခွင့်ပြုထားသော စာသားနှင့် ဝေး ဝေး ထွက်လာသည်။ ။။။။။
အရေးအခင်း ထိန်းချုပ်မရ ဖြစ်ပြီ……
ကျောက်ကျိယန် တိုင်းပြည်တွင်း မရှိခိုုက် အစိုးရတွင်း သဘောထား တင်းမာသူ လီပင်း တို့အုပ်စု အခွင့်ကောင်းယူကာ ဩဇာတိက်ကမ ပြည့်စုံသော ပါတီအတိုင်ပင်ခံ ခေါင်းဆောင် တိန်ရှောက်ပင်ထံ နားသွင်းတော့သည်။ တိန် ကိုယ်တိုင်မှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမား၊ ဈေးကွက် စီးပွားရေး ထောက်ခံသူ၊ ပိုမိုပွင့်လင်းသည့် အမြင်ရှိသူ ဖြစ်သော်လည်း ကျောင်းသားများ၏ ခြိမ်းခြောက်မှု အန်ဒရယ်ကို သဘောထား တင်းမာသူများ၏ ပုံကြီးချဲ့ကား လုပ်ကြံခံခဲ့ရသည်။ ကျောင်းသားများ သူ့အား လူကိုယ်တိုင် ရန်ပြုကြောင်း နှင့် သူ နှုတ်ထွက်ပေးရေး၊ ကူမြူနစ် အစိုးရ ပြုတ်ကျရေး တောင်းဆိုနေကြောင်း လီပင်းက တိန်အား နားသွင်းသည်။ (ထိုစွပ်စွဲချက်မှာ လုပ်ကြံဖန်တီးမှု ဖြစ်သည်။) အစိုးရိမ်ကြီးလာတဲ့ တိန်က ဧပြီ ၂၆ ပြည်သူ့နေ့စဉ် သတင်းစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော်တွင် ဆန်ဒပြပွဲအား ပြစ်တင်ရှုံ့ချသည်။ သူက ဆန်ဒပြပွဲအား လူနဲနဲလေးမှ ပြုလုပ်သော “ဒေါင်လန် dongluan” ဖျက်လိုဖျက်ဆီး အကြမ်းဖက် အဓိကရုဏ်းဟု အမည်တပ်သည်။ ထိုသို့ စိတ်ခံစားချက်ပါသော စကားလုံးများမှာ ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေးကာလ ပြင်းထန်လှသော ရက်စက်မှုများနှင့် ဆက်နွယ်သည်။ ကျောင်းသားများစိတ်ကို ငြိမ်သက်အောင် ပြုရမည့်အစား တိန်၏ အယ်ဒီတာအာဘော် ရေးသားချက်က နောက်မီးတောက် ဆွပေးခဲ့သည်။ အစိုးရမှ ဒုတိယအကြိမ် ကိုယ့်သေတွင်း ကိုယ်တူးသည့်အမှား ကျူးလွန်လိုက်သည်။ ။။။။။။
ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာပင် ကျောင်းသားများမှ အကြမ်းဖက် အဓိကရုဏ်းတံဆိပ် အတပ်ခံရလျင် ပြစ်ဒဏ်အပေး ခံရမည်စိုးရွေ့ ဆန်ဒပြမှုအား အဆုံးမသတ်ရန် စိုင်းပြင်းကုန်သည်။ သူတို့ထဲမှ ငါးသောင်းလောက်က လမ်းသရဲဝါဒ မဟုတ်ကြောင်း၊ မျိုးချစ်ဝါဒရဲ့ လှုံ့စော်မှု ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက် ဖိအားပေး တိုက်ပွဲဝင်သည်။ ထိုစကားလုံး သုံးစွဲပုံဖေါ်မှုအား အစိုးရမှ ရုတ်သိမ်းသော်လည်း တိန်အင်န်မင်ရင်ပြင်မှ ကျောင်းသားများ မထွက်ခွာတော့ချေ။ အစိုးရခမျာလဲ အယ်ဒီတာ့အာဘော် ရေးသားချက်နှင့် ပိတ်မိနေသည်။ တိန် နှင့် အစိုးရ နာမည်ဆယ်ရန် ကျောင်းသားများ မှားယွင်းကြောင်း ဝန်ခံခိုင်းရတော့သည်။ ဘယ်သူ မျက်တောင် စခတ်မည်နည်း…. ။ ။။။။။
ကျောက်ကျိယန် နှင့် လီပင်း အပြတ်ရှင်းပွဲ…..
အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ကျောက် မြောက်ကိုရီးယားမှ ပြန်လာချိန်ဝယ် ပဋိပက်ခဖြင့် တုပ်နှောင်မိနေသော တရုတ်ပြည်အား တွေ့သည်။ ကျောင်းသားများမှာ အစိုးရအတွက် တကယ် ခြိမ်းခြောက်မှုဟု သူမမြင်ဘဲ တင်းမာမှု လျော့ချရန် ကြိုးစားသည့် အနေနှင့် တိန်ရှောက်ပိန်အား မီးတောက်လောင်စေသည့် အယ်ဒီတာ အာဘော်ကို ပြန်ရုပ်သိမ်းရန် တိုက်တွန်းသည်။ ဒါပေမဲ့ လီပင်းက နောက်ဆုတ်လျင် ပါတီခေါင်းဆောင်ပိုင်း သေရာပါ အားနည်းချက် ပြသလိုဖြစ်မည် စောဒက တက်သည်။ ။။။။။။
ထိုအခိုက် အခြား မြို့ကြီးများမှ ကျောင်းသားများ ဆန်ဒပြပွဲ ပူးပေါင်းရန် ပေကျင်းသို့ စုပြုံဝင်ရောက်လာသည်။ အစိုးရအတွက် ပိုစိုးရိမ်သောကရောက်စေတာ အိမ်ရှင်မ၊ အလုပ်သမား၊ ဆရာဝန် နှင့် တရုတ်ရေတပ်မှ တပ်သားများပါ ပူးပေါင်းပါဝင်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆန်ဒပြပွဲများ အခြားမြို့ကြီးများသို့ ပြန့်နှံ့သွားရာ ရှန်ဟဲ၊ Urumqi ၊ ဇီယန်၊ တီယန်ကျင်း အစရှိသော မြို့ပေါင်း ၂၅ဝ နီးပါး ရှိလေသည်။ ။။။။။
မေ ၄၊ ပေကျင်း၌ ဆန်ဒပြသူ အရေအတွက် တသိန်းကျော်သွားခဲ့သည်။ မေ ၁၃ တွင် ကျောင်းသားများမှ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျမည့် ခြေလှမ်း လှမ်းမိသည်။ ဧပြီ ၂၆၊ အယ်ဒီတာ အာဘော်ကို အစိုးရ ပြန်ရုပ်ပေးရေး ရည်ရွယ်ချက်နှင့် သူတို့ အစာငတ်ခံ သပိတ်မှောက်ပွဲ ကြေငြာသည်။ ကျောင်းသား တထောင်ကျော် အစာငတ်ခံ သပိတ်တွင် ပါဝင်ပြီး အများပြည်သူများအကြား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန် ရထားသည့် စာနာမှုကို ခြိမ်းခြောက်သလို ဖြစ်မိသွားသည်။ နောက်တနေ့တွင် အစိုးရမှ အရေးပေါ် ကော်မတီ အစည်းအဝေး ခေါ်ယူသည်။ ကျောက် မှ သူ့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် ခေါင်းဆောင်များအား ကျောင်းသားများ တောင်းဆိုချက်ကို သဘောတူရန် နှင့် အယ်ဒီတာအာဘော် ပြန်ရုပ်သိမ်းရန် တိုက်တွန်းသည်။ လီပင်းက ကျောင်းသားများအား အင်အားသုံး ဖြိုခွဲရန် တိုက်တွန်းသည်။ အရေးပေါ် ကော်မတီမှာ သောင်မတင် ရေမကျ ဖြစ်နေရွေ့ အပြီးသတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ခွင့် တိန်ရှောက်ပိန် ရရှိသွားသည်။ နောက်နေ့မနက်တွင် ပေကျင်းမြို့တော်အား စစ်အုပ်ချုပ်ရေး အောက်ထားရှိကြောင်း ကြေငြာသည်။ ကျောက်ကို ရာထူးမှ ဖြုတ်ပြီး စစ်သွေးကြွ လီပင်းအား ပေကျင်းရှိ စစ်တပ်အမိန့်ပေးရာထူး ခန့်သည်။ ။။။။။။
ပြသနာ အရှုပ်ထုပ်အလယ် မေ ၁၆တွင် ကျောက်နှင့် ဆွေးနွေးရန် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမား ဆိုဗီယက် သမတ မီခေးလ် ဂေါ်ဘာချက် တရုတ်ပြည်သို့ ရောက်ရှိသည်။ ဂေါ်ဘာချက် သတင်းယူရန် နိုင်ငံခြား ဂျာနယ်လစ် နှင့် ဓါတ်ပုံဆရာ မြောက်များစွာလဲ ေပါက်ကွဲလုနီးနီး တရုတ်မြို့တော်သို့ ရောက်လာသည်။ ၎င်းတို့ရဲ့ သတင်းပို့ချက်များေကြာင့် နိုင်ငံတကာကို စိုးရိမ်စေကာ ချုပ်တည်းသည်းခံရန် တောင်းဆိုမှုများ ရှိလာသည့်အပြင် ဟောင်ကောင်၊ ထိုင်ဝမ် နှင့် အနောက်နိုင်ငံများရှိ မျိုးချစ်ဟောင်း တရုတ်အသိုင်းအဝန်းများတွင်ပါ ဂရုဏာသက်စာနှာပြသည့် ဆန်ဒပြပွဲများ ပေါ်ပေါက်သည်။ နိုင်ငံတကာမှ ကျယ်လောင်စွာ ဝေဖန်မှုများကြောင့် တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီ ခေါင်းဆောင်းပိုင်းမှာ ပိုမို ဖိအားပေး ခံနေရပြီ။ ။။။။။။
မေ ၁၉ မနက်အစောပိုင်းတွင် ရာထူး အဖြုတ်ခံရသော ကျောက် တိန်အင်န်မင်ရင်ပြင်၌ ထူးထူးခြားခြား ထွက်ပေါ်လာသည်။ အသံချဲ့စက်မှ တဆင့် ဆန်ဒပြသူများအား “ကျောင်းသားတို့ ကျုပ်တို့အလာ သိပ်နောက်ကျခဲ့တယ်၊ တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျုပ်တို့ကို ခင်များတို့ ထောက်ပြ ဝေဖန်တယ်၊ လိုအပ်နေတဲ့ အရာတွေပါပဲ။ ဒီကိုလာတာ ကျုပ်ကို ခင်များတို့ဆီက ခွင့်လွှတ်မှု ေတာင်းခံဖို့ မဟုတ်ဘူး။ ေပြာချင်တာ မောင်တို့မယ်တို့ ကျောင်းသားတွေ သိပ်ပင်ပန်း အားနည်းနေပြီ၊ မင်းတို့ အစာငတ်ခံ တိုက်ပွဲဝင်တာ ရရက် ရှိပြမို့ ဒီအတိုင်း ဆက်သွားလို့ မရတော့ဘူး… မင်းတို့ဟာ ငယ်သေးတယ်၊ နောက်ရက်တွေ အများကြီး ရှိသေးတယ်၊ ကျန်းမာနေမှ တရုတ်နိုင်ငံ ခေတ်မှီတိုးတက်ရေး ဦးတည်ချက် ၄ရပ် အောင်မြင်တာ တွေ့နိုင်လိမ့်မယ်။ ကျုပ်တို့နဲ့ မင်းတို့ မတူဘူး၊ ကျုပ်တို့က အိုနှင့်ပြီ၊ ကိစ်စ မရှိတော့ဘူး။” ဟု ပြောခဲ့သည်။ ထိုအကြိမ်မှာ သူ့ကို လူထုမြင်ကွင်း နောက်ဆုံးတွေ့ရတာ ဖြစ်သည်။ ။။။။။။
ကျောက်ရဲ့ တင်ပြချက်အား တုံ့ပြန်ရွေ့လား မသိ… မေလ နောက်ဆုံးပတ်တွင် တင်းမာမှု အနည်းငယ် လျော့သွားပြီး ပေကျင်းမှ ဆန်ဒပြကျောင်းသား အများအပြား ဆန်ဒပြပွဲကို စိတ်ပျက်အားလျော့ကာ ရင်ပြင်မှ ထွက်ခွာသွားသည်။ သို့သော် အခြား ခရိုင်များမှ ဆန်ဒပြ တပ်ကူများ မြို့တော်တွင်း ဝင်လာမစဲ ရှိနေဆဲပင်။ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပြည်သူ့ ကွန်ဂရက် စည်းဝေးပွဲ ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားသော ဇွန် ၂ဝ အထိ ဆန်ဒ ဆက်ပြရန် သဘောထား တင်းမာသူ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များ ဆော်ဩသည်။ ။။။။။
မေ ၃၀၊ တိန်အင်န်မင်ရင်ပြင်တွင် ကြီးမားသော ဒီမိုကရေစီ နတ်သမီး လက်လုပ် ရုပ်ထုအား ကျောင်းသားများ စိုက်ထူသည်။ လစ်ဘာတီ လွတ်လပ်ရေး ကျေက်ရုပ်အား ပုံစံယူထားကာ ဆန်ဒပြပွဲ၏ ထင်ရှားသော သင်္ကေတများထဲမှ တခု ဖြစ်လာသည်။ ဆန်ဒပြပွဲ ဆက်လက်ပြုလုပ်ရန် ကြေငြာချက် ကြားသိသည့်အခါ ကူမြူနစ်ပါတီ အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ နှင့် ကျန်ရှိသော ပေါလစ်ဗြူရို နိုင်ငံရေးဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ ဇွန်၂တွင် စည်းဝေးသည်။ တိန်အင်န်မင်ရင်ပြင်မှ ဆန်ဒပြသမားများအား အင်အားသုံး ရှင်းလင်းရန် ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးစစ်တပ် (ပီအယ်လ်အေ) အား ဆင့်ခေါ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ ။။။။။
တိန်အင်န်မင်ရင်ပြင် လူသတ်ပွဲ …….
၁၉၈၉ ဇွန်၃ မနက်၊ ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးစစ်တပ် အမှတ် ၂၇၊ ၂၈ တပ်မများ တိန်အင်န်မင်ရင်ပြင်ထဲ ခြေလျင်တပ်၊ တင့်ကား နှင့် မျက်ရည်ယိုဓါတ်ငွေ့များ သုံးရွေ့ ဆန်ဒပြသူများအား လူစုခွဲသည်။ ဆန်ဒပြသူများအား ပစ်ခတ်ရန် အမိန့်ပေးမထားသဖြင့် စစ်သားအများစု သေနတ်ကိုင် မထားကြချေ။ ဆန်ဒပြသူများအား ထောက်ခံဖွယ် ရှိလို့ မြို့ပေါ်ရှိ ပီအယ်လ်အေ စစ်တပ်အား မယုံကြည်ဘဲ ဝေးလံခေါင်ဖျား ခရိုင်များမှ အဆိုပါ တပ်မများကို ခေါင်းဆောင်များ တမင် ရွေးထားသည်။ စစ်တပ်အား ဆန်ဒပြ ကျောင်းသားများသာမက ထောင်ပေါင်းများစွာသော အလုပ်သမား နှင့် ပေကျင်းရှိ သာမန် ပြည်သူပြည်သားလည်း ပူးပေါင်း တွန်းလှန်ခဲ့ကြသည်။ မီးလောင်ခံထားေသာ ဘတ်စ်ကားများနှင့် အတားအဆီး ပြုလုပ်ခြင်း၊ ကျောက်တုံး အုတ်ခဲများနှင် စစ်သားများအာ ပစ်ပေါက်ခြင်း အပြင် စစ်သားများပါသော တင့်ကားကိုပင် အရှင်လတ်လတ် မီးတင်ရှို့သည်။ တိန်အင်န်မင်ရင်ပြင် အရေးအခင်း ပထမဆုံး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူမှာ တကယ်တော့ စစ်သားများဖြစ်သည်။ ။။။။။
ဆန်ဒပြ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်ပိုင်း ယခုအခါ ခက်ခဲသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ရင်ဆိုင်နေရပြီ။ နောက်ထပ် သွေးထွက်သံယို မဖြစ်ခင် ရင်ပြင်ကို စွန့်ခွာမလား ဒါမှမဟုတ် သူတို့ နေရာ ဆက်ထိန်းမလား ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် အများအပြား ဆက်နေရန် ဆုံးဖြတ်သည်။ ထိုည ၁၀:၃ဝ လောက်တွင် တိန်အင်န်မင်ရင်ပြင် အနီးတဝိုက်သို့ ပီအယ်လ်အေတပ် လှံစွပ်တပ် ရိုင်ဖယ်များနှင့် ပြန်ရောက်လာသည်။ လမ်းထဲသို့ တင့်ကားများ တဂျိမ်းဂျိမ်း ဝင်လာပြီး မည်သူမည်ဝါ မခွဲခြား မဲမဲမြင်ရာ ပစ်ခတ်သည်။ ကျောင်းသားများက သူတို့နှင့် အသက်ရွယ်တူ စစ်သားများအား “ဘာလို့ ငါတို့ကို သတ်တာလဲ” လှမ်းအော်ကြသည်။ ဆိုက်ကား သမားများ၊ စက်ဘီးစီးသူများ အပစ်အခတ်များကြားထဲမှ တဟုန်ထိုး ပြေးသွားကာ ဒဏ်ရာရသူများအား ကယ်ဆယ်ပြီး ဆေးရုံပို့သည်။ ကပ်ဘေးအတွင်း ဆန်ဒပြသမား မဟုတ်သူများလဲ ပစ်သတ်ခံခဲ့ကြရသည်။ လူအများသိတာနဲ့ ကွဲလွဲေရွ့ အကြမ်းဖက်မှုများမှာ အုံနှင့်ကျင်းလိုက် ရင်ပြင်ထဲမှာထက် တိန်အင်န်မင်ရင်ပြင် အနီးဝန်းကျင်တွင် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဇွန် ၃ ညလုံးပေါက် နှင့် ဇွန် ၄ မနက်အစောပိုင်းအထိ ဆန်ဒပြသူများကို စစ်သားများ ရိုက်နှက်၊ လှံစွပ်ထိုး၊ ပစ်ခတ်ကြသည်။ လူအုပ်ထဲသို့ တင့်ကားများ တန်းမောင်းဝင်ပြီး ချိန်းကြိုးဘီးနှင့် လူ၊ စက်ဘီးများအား တက်ကြိတ်သည်။ ၁၉၈၉ ဇွန် ၄ မနက် ၆ နာရီ၊ တိန်အင်န်မင်ရင်ပြင် တဝိုက် လမ်းများအား ရှင်းလင်းပြီး ဖြစ်သည်။ ။။။။။
အညတရ သူပုန် (ခ) တင့်ကားလူသား ……
ဇွန် ၄၊ သေနတ်သံများ အတွဲလိုက် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းကို ဖြိုခွင်း ထွက်လာသဖြင့် တမြို့လုံး တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားနေသည်။ သူတို့ သား၊ သမီးများကို ရှာဖွေနေတဲ့ ပျောက်ဆုံး ကျောင်းသား မိဘတွေက ဆန်ဒပြပွဲနေရာဆီ တွန်းထိုးသွားပေမဲ့ သူတို့ပါ ခြိမ်းခြောက် အပစ်ခံရလို့ စစ်သားများနှင့်ဝေးရာ ထွက်ပြေးရသည်။ ဒဏ်ရာရသူများကို ကူညီရန် အခင်းဖြစ်ရာ သွားတဲ့ ဆရာဝန်၊ သူနာတင်ယာဉ်မောင်းတွေလဲ ပီအယ်လ်အေ စစ်သားများရဲ့ သွေးအေးအေးနဲ့ ရက်စက်စွာ ပစ်သတ်ခံရသည်။ ။။။။။။။
ဇွန် ၅၊ ပေကျင်းတမြို့လုံးကို ထိန်းချုပ်နိုင်လိုက်ပုံရသည်။ အေပီ သတင်းထောက် ဂျက်ဖ် ဝိုက်ဒန်နာ အပါအဝင် နိုင်ငံခြား သတင်း၊ ဓါတ်ပုံ ဆရာများ သူတို့ တည်းခိုရာ ဟိုတယ် ဆင်ဝင် အပေါ်ထပ်မှ ချန်အန် လမ်းမထဲ (the Avenue of Eternal Peace) တင့်ကားတန်း တဂျိမ်းဂျိမ်းနဲ့ ဆူညံစွာ မောင်းဝင်လာတာ ကြည့်နေခိုက် အလွန်ထူးဆန်း အံ့ချီးမကုန်နိုင်ဖွယ် အခြင်းအရာ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ။။။။။
လက်တဖက်စီတွင် ဈေးဝယ်အိတ် ကိုယ်ထားသော အင်္က ျီအဖြူ၊ ဘောင်းဘီအနက်ဝတ် လူငယ်တဦး လမ်းထဲမှ ထွက်လာပြီး တင်ကားတန်းရှေ့ ပိတ်ရပ် တားသည်။ ရှေ့ဆုံးမှ တင့်ကား သူ့ကို ရှောင်ပတ်မောင်းဖို့ ကြိုးစားတိုင်း အဲဒီလူငယ် တင့်ကားသွားရာလမ်း ပိတ်ရပ်တားသည်။ ကြည့်နေသူတိုင်း အော်ဟစ်ထိတ်လန့်ကုန်ကာ တင့်ကားမောင်းသူ စိတ်တိုပြီး သူ့အား တက်မောင်းကြိတ်ပစ်မည်ကို စိုးတထိတ်ထိတ် ဖြစ်နေသည်။ တချိန်မှာ တင့်ကားပေါ်ကိုတောင် ခုန်တက်ပြီး သူက အထဲရှိ စစ်သားတွေကို “မင်းတို့ဘာလို့ ဒီမှာ ရှိနေတာလဲ၊ မင်းတို့ကြောင့် ဝမ်းနည်းဒုတ်ခ ရောက်ကုန်ရပြီ” ပြောကြောင်း သတင်းများမှ ဆိုသည်။ ။။။။။
ပြောင်မြောက်လှတဲ့ အံတုမှု မိနစ်အတော်ကြာပြီးနောက် လူနှစ်ဦး ပြေးထွက်လာပြီး တင့်ကားလူသားကို အလျင်အမြန် ဆွဲခေါ်သွားသည်။ သူ့ကံကြမာအား မသိရတော့ပေ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ ရဲစွမ်းသက်တိ ရှိလှသော လုပ်ဆောင်ချက်ကို အနီးရှိ အနောက်တိုင်း သတင်းသမားတို့ ဓါတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း ရိုက်ကူးပြီး တကဗာလုံး မြင်တွေ့ရန် ခိုးထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ တရုတ် လုံခြုံရေး အဖွဲ့များ ရှာမတွေ့စေရန် တင့်ကားတိပ်ခွေကို တည်းခိုရာ ဟိုတယ် အိမ်သာထဲ သတင်းေထာက် ဝိုက်ဒန်နာ နှင့် အခြား ဓါတ်ပုံဆရာများ ဖွက်ခဲ့ရသည်။ ။။။။။
ခပ်ထေ့ထေ့ ပြောကြေးဆို တင့်ကားလူသားရဲ့ အံတုမှု သတင်းပုံရိပ်များက မိုင်ထောင်ပေါင်းများစွာ ဝေးကွာသော အရှေ့ဥရောပသို့ အပြင်းထန်ဆုံး အရှိန်နဲ့ တမဟုတ်ခြင်း ရောက်ရှိသွားသည်။ သူ့ ရဲဝံ့ပြောင်မြောက်မှုကို တစိတ်တပိုင်း အတုခိုး အားကျလို့ ဆိုဗီယက် အုပ်စုဝင် နိုင်ငံများရှိ ပြည်သူလူထု လမ်းပေါ်ထွက် လာခဲ့ကြသည်။ ၁၉၉ဝ တွင် ဘော်လ်တစ် နိုင်ငံများမှ စတင်ကာ ဆိုဗီယက် အင်ပါယာကြီး စတင် ပြိုကွဲတော့သည်။ ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု ပြိုလဲသွားခဲ့သည်။ ။။။။။။
တိန်အင်န်မင်ရင်ပြင် လူသတ်ပွဲတွင် ဘယ်နှစ်ယောက် သေလဲ သိသူ မရှိပါ။ တရုတ်အစိုးရ ကိန်းဂဏန်းမှာ ၂၄၁ ဦး ဖြစ်ပေမဲ့ အလွန်အမင်း လေ ျှှာ့ပြတာ သေချာသလောက် ဖြစ်သည်။ စစ်သား၊ ဆန်ဒပြသမား၊ အရပ်သား အားလုံးပေါင်းလျင် လူ ၈၀ဝ မှ ၄၀၀ဝ အကြား အသတ်ခံရဖွယ် ရှိသည်။ ဒေသခံ ဆေးရုံ စာရင်းများကို အခြေခံရွေ့ တရုတ် ကြက်ခြေနီအသင်းမှ အစောပိုင်းတွင် သေဆုံးသူ အရေအတွက် ၂၆၀ဝ ပြောသော်လဲ အစိုးရ၏ ပြင်းထန်သော ဖိအားကြောင့် အလျင်အမြန်ပဲ ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။ မျက်မြင်သက်သေ အချို့ ပြောချက်အရ အလောင်းများစွာကို ပီအယ်လ်အေ စစ်သားများ ဆွဲယူသွားပြီး ဆေးရုံသေစာရင်းထဲ ပါရှိဟန် မတူခဲ့ချေ။ ။။။။။
တိန်အင်န်မင် အရေးအခင်းမှ အသက်ရှင် လွတ်မြောက်သူ ဆန်ဒပြသူတို့ အမျိုးမျိုးသော ကံကြမာနှင့် ကြုံတွေ့ရသည်။ အချို့မှာ (အထူးသဖြင့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ) သိပ်မပြင်းထန်ဟု ပြောနိုင်သော ထောင်ဒဏ် ဆယ်နှစ်အောက် ချခံရသည်။ ပါမောက်ခ နှင့် အခြားတတ်သိ ပညာရှင် များစွာ နာမည်ပျက်စာရင်း အသွင်းရလို့ ဘယ်မှာမှ အလုပ်ရှာ မရတော့။ မြောက်များစွာသော အလုပ်သမား၊ မြို့တော် အပြင်ဖက်နယ်များမှ လာဆန်ဒပြသော အရပ်သားများမှာ အကျဥ်းရုံး ကွက်မျက်ခြင်း ခံရပြီး အရေအတွက် အတိအကျကို ထုံးစံအတိုင်း မီးအေမှာင်ချခံရသည်။ ဆန်ဒပြသူများအား ဂရုဏာသက်ကြောင်း ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူ တရုတ် ဂျာနယ်လစ်များလဲ အနှိပ်ကွပ် ခံရပြီး အလုပ်ပြုတ်ကုန်သည်။ သိပ်ထင်ရှားသူ အချို့မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ထောင်ဒဏ် ေပးခံရသည်။ ။။။။။
တရုတ်အစိုးရအတွက် ၁၉၈၉ ဇွန် ၄ ရက်နေ့မှာ သမိုင်းတွင်မည့် ဖြစ်ရပ် ဖြစ်သည်။ တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားများ ရာထူးမှ ဖြုတ်ချခံရပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိသော အဆောင်အယောင် ရာထူး ပြောင်းလဲချထား ခံရသည်။ ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ကျောက်ကျိယန်မှာ ပြန် နာလန်မထူနိုင်တော့ပဲ သူ့နောက်ဆုံး ၁၅နှစ်ကို နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဘဝနှင့် ကုန်ဆုံးသွားသည်။ ရှန်ဟဲမြို့ ဆန်ဒပြပွဲအား လျင်မြန်စွာ ငြိမ်းသက်ခဲ့သူ ရှန်ဟဲမြို့တော်ဝန် ကျန်ဇီမင်းကို ပါတီအထွေထွေ အတွင်းရေးမှုးအဖြစ် ကျောက်နေရာ အစားထိုးခဲ့သည်။ ။။။။။ (ေနာင်တွင် သမတဖြစ်၊ စကားချပ်) ။။။။။
ထိုအချိန်မှစရွေ့ တရုတ်ပြည်တွင် နိုင်ငံရေး အုံကြွမှုများ လွန်စွာ ငြိမ်သက်သွားသည်။ နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုထက် စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး နှင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာရေးကိုသာ အစိုးရ နှင့် ပြည်သူအများစု အာရုံစိုက်တော့သည်။ တိန်အင်န်မင်ရင်ပြင် လူသတ်ပွဲမှာ မထိရ မကိုင်ရ တားမြစ်ထားသည့် အကြောင်းအရာမို့ အသက် ၂၅နှစ်အောက် တရုတ်အများစု ယင်းဖြစ်ရပ်ကို လုံးဝ ကြားသိဖူးခြင်း မရှိတော့ချေ။ ဇွန် ၄ အရေးအခင်း ဖေါ်ပြသော အင်တာနက် ဝဘ်ဆိုက်များအား တရုတ်ပြည်တွင် ပိတ်ဆို့ထားသည်။ ဆယ်စုနှစ်များစွာ ကြာသည့်တိုင် တရုတ်ပြည်သူများ နှင့် အစိုးရ တို့ သမိုင်းတွင်သည့် ထို ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ အဖြစ်အပျက်အား မဖြေရှင်းပဲ ထားလျက်ရှိသည်။ ။။။။။ တိန်အင်န်မင်ရင်ပြင် လူသတ်ပွဲ ပုံရိပ်များမှာ မှီလိုက်သူများအဖို့ နေ့စဉ်ဓူဝ ပြန်ပြောင်း အမှတ်ရနေဆဲ ဖြစ်သည်။ တနေ့မှာေတာ့ သမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန် တခုအား တရုတ် အစိုးရ ရင်ဆိုင်ရမည်သာ ဖြစ်သည်။ ။။။။။
စာကြွင်း။။။ မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီ အရေးအခင်းပြီးနောက်ပိုင်း ယူနန်ကတဆင့် တရုတ်ဆန်ဒပြ လှုပ်ရှားသူတဦး မြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်လို့ ရန်ကုန်က ယူအက်စ်သံရုံး (ယခု စတော့အိပ်ချိန်း) ထဲဝင် နိုင်ငံရေး ခိုလှုံခွင့်တောင်းတယ်။ ရက် အနည်းငယ် ကြာပြီးနောက် သံရုံးက လက်မခံလို့ ကြေးမုံဂျီးတို့အမျိုး တရုတ်ပြည်ဖက် ပြန်အပို့ခံရတယ်။ နှစ်ရှည်လများ ေထာင်ဒဏ်အပေးခံရတယ်။ အဲဒီလူ ကံကြမာ ဘယ်လိုရှိတယ်မသိ။ ထောင်ထဲမှာပဲလား၊ ပြန်လွတ်ပြီလား၊ သေလား ရှင်လား… အတွေးများစွာ….။။။။ ။။။။။။
လူသတ်ကောင် တရုတ်စစ်တပ် (PLA) နိုင်ငံရေးမှုး ကူမြနစ်ကေဒါ ကြေးမုံဂျီး၏ဘဲ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဝါဒီ တရုတ်မခြစ်သူ ကြောင်ကြီး
……….. ………………. …………..
……….. ……………… …………….
The Tiananmen Square Massacre, 1989
Most people in the western world remember the Tiananmen Square Massacre this way:
1) Students protest for democracy in Beijing, China, in June of 1989.
2) Chinese government sends troops and tanks to Tiananmen Square.
3) Student protesters are brutally massacred.
In essence, this isafairly accurate depiction of what happened around Tiananmen Square, but the situation was much longer-lasting and more chaotic than this outline suggests.
The protests actually started in April of 1989, as public demonstrations of mourning for former Communist Party Secretary General Hu Yaobang.
A high government official’s funeral seems like an unlikely spark for pro-democracy demonstrations and chaos. Nonetheless, by the time the Tiananmen Square Protests and Massacre were over less than two months later, 250 to 7,000 people lay dead.
What really happened that spring in Beijing?
By the 1980s, the leaders of China’s Communist Party knew that classical Maoism had failed. Mao Zedong’s policy of rapid industrialization and collectivization of land, the “Great Leap Forward,” had killed tens of millions of people by starvation.
The country then descended into the terror and anarchy of the Cultural Revolution (1966-76), an orgy of violence and destruction that saw teenaged Red Guards humiliate, torture, murder and sometimes even cannibalize hundreds of thousands or millions of their compatriots.
Irreplaceable cultural heirlooms were destroyed; traditional Chinese arts and religion were all but extinguished.
China’s leadership knew that they had to make changes in order to remain in power, but what reforms should they make? The Communist Party leaders split between those who advocated drastic reforms, includingamove toward capitalist economic policies and greater personal freedoms for Chinese citizens, versus those who favored careful tinkering with the command economy and continued strict control of the population.
Meanwhile, with the leadership unsure of which direction to take, the Chinese people hovered inano-man’s land between fear of the authoritarian state, and the desire to speak out for reform. The government-instigated tragedies of the previous two decades left them hungry for change, but aware that the iron fist of Beijing’s leadership was always ready to smash down opposition. China’s people waited to see which way the wind would blow.
The Spark – Memorial for Hu Yaobang
Hu Yaobang wasareformist, who served as General Secretary of the Communist Party of China from 1980 to 1987. He advocated rehabilitation of people persecuted during the Cultural Revolution, greater autonomy for Tibet, rapprochement with Japan, and social and economic reform. Asaresult, he was forced out of office by the hardliners in January of 1987 and made to offer humiliating public “self-criticisms” for his allegedly bourgeois ideas.
One of the charges leveled against Hu was that he had encouraged (or at least allowed) widespread student protests in late 1986. As General Secretary, he refused to crack down on such protests, believing that dissent by the intelligentsia should be tolerated by the Communist government.
Hu Yaobang died ofaheart attack not long after his ouster and disgrace, on April 15, 1989.
Official media made just brief mention of Hu’s death, and the government at first did not plan to give himastate funeral. In reaction, university students from across Beijing marched on Tiananmen Square, shouting acceptable, government-approved slogans, and calling for the rehabilitation of Hu’s reputation.
Bowing to this pressure, the government decided to accord Huastate funeral after all. However, government officials on April 19 refused to receiveadelegation of student petitioners, who patiently waited to speak with someone for three days at the Great Hall of the People. This would prove to be the government’s first big mistake.
Hu’s subdued memorial service took place on April 22 and was greeted by huge student demonstrations involving about 100,000 people.
Hardliners within the government were extremely uneasy about the protests, but General Secretary Zhao Ziyang believed that the students would disperse once the funeral ceremonies were over. Zhao was so confident that he tookaweek-long trip to North Korea forasummit meeting.
The students, however, were enraged that the government had refused to receive their petition, and emboldened by the meek reaction to their protests. After all, the Party had refrained from cracking down on them thus far, and had even caved in to their demands foraproper funeral for Hu Yaobang. They continued to protest, and their slogans strayed further and further from the approved texts.
Events Begin to Spin Out of Control
With Zhao Ziyang out of the country, hardliners in the government such as Li Peng took the opportunity to bend the ear of the powerful leader of the Party Elders, Deng Xiaoping. Deng was known asareformer himself, supportive of market reforms and greater openness, but the hardliners exaggerated the threat posed by the students. Li Peng even told Deng that the protesters were hostile to him personally, and were calling for his ouster and the downfall of the Communist government. (This accusation wasafabrication.)
Clearly worried, Deng Xiaoping decided to denounce the demonstrations in an editorial published in the April 26th People’s Daily. He called the protests dongluan (meaning “turmoil” or “rioting”) bya“tiny minority.” These highly emotive terms were associated with the atrocities of the Cultural Revolution.
Rather than tamping down the students’ fervor, Deng’s editorial further inflamed it. The government had just made its second grave mistake.
Not unreasonably, the students felt that they could not end the protest if it was labeled dongluan, for fear that they would be prosecuted. Some 50,000 of them continued to press the case that patriotism motivated them, not hooliganism. Until the government stepped back from that characterization, the students could not leave Tiananmen Square.
But the government too was trapped by the editorial. Deng Xiaoping had staked his reputation, and that of the government, on getting the students to back down. Who would blink first?
Showdown, Zhao Ziyang vs. Li Peng
General Secretary Zhao returned from North Korea to find China transfixed by the crisis. He still felt that the students were no real threat to the government, though, and sought to defuse the situation, urging Deng Xiaoping to recant the inflammatory editorial.
Li Peng, however, argued that to step back now would beafatal show of weakness by the Party leadership.
Meanwhile, students from other cities poured into Beijing to join the protests. More ominously for the government, other groups also joined in: housewives, workers, doctors, and even sailors from the Chinese Navy! The protests also spread to other cities – Shanghai, Urumqi, Xi’an, Tianjin… almost 250 in all.
By May 4, the number of protesters in Beijing had topped 100,000 again. On May 13, the students took their next fateful step.
They announcedahunger strike, with the goal of getting the government to retract the April 26 editorial.
Overathousand students took part in the hunger strike, which engendered wide-spread sympathy for them among the general populace.
The government met in an emergency Standing Committee session the following day. Zhao urged his fellow leaders to accede to the students’ demand and withdraw the editorial. Li Peng urgedacrackdown.
The Standing Committee was deadlocked, so the decision was passed to Deng Xiaoping. The next morning, he announced that he was placing Beijing under martial law. Zhao was fired and placed under house arrest; hard-liner Jiang Zemin succeeded him as General Secretary; and fire-brand Li Peng was placed in control of the military forces in Beijing.
In the midst of the turmoil, Soviet Premier and fellow reformer Mikhail Gorbachev arrived in China for talks with Zhao on May 16.
Due to Gorbachev’s presence,alarge contingent of foreign journalists and photographers also descended on the tense Chinese capital. Their reports fueled international concern and calls for restraint, as well as sympathetic protests in Hong Kong, Taiwan, and ex-patriot Chinese communities in Western nations.
This international outcry placed even more pressure on the Chinese Communist Party leadership.
Early in the morning on May 19, the deposed Zhao made an extraordinary appearance in Tiananmen Square. Speaking throughabullhorn, he told the protesters: “Students, we came too late. We are sorry. You talk about us, criticize us, it is all necessary. The reason that I came here is not to ask you to forgive us. All I want to say is that students are getting very weak, it is the 7th day since you went on hunger strike, you can’t continue like this… You are still young, there are still many days yet to come, you must live healthily, and see the day when China accomplishes the four modernizations. You are not like us, we are already old, it doesn’t matter to us anymore.” It was the last time he was ever seen in public.
Perhaps in response to Zhao’s appeal, during the last week of May tensions easedabit, and many of the student protesters from Beijing grew weary of the protest and left the square. However, reinforcements from the provinces continued to pour into the city. Hard-line student leaders called for the protest to continue until June 20, whenameeting of the National People’s Congress was scheduled to take place.
On May 30, the students set upalarge sculpture called the “Goddess of Democracy” in Tiananmen Square. Modeled after the Statue of Liberty, it became one of the enduring symbols of the protest.
Hearing the calls foraprolonged protest, on June2the Communist Party Elders met with the remaining members of the Politburo Standing Committee. They agreed to bring in the People’s Liberation Army (PLA) to clear the protesters out of Tiananmen Square by force.
The morning of June 3, 1989, the 27th and 28th divisions of the People’s Liberation Army moved into Tiananmen Square on foot and in tanks, firing tear gas to disperse the demonstrators. They had been ordered not to shoot the protesters; indeed, most of them did not carry firearms.
The leadership selected these divisions because they were from distant provinces; local PLA troops were considered untrustworthy as potential supporters of the protests.
Not only the student protesters but also tens of thousands of workers and ordinary citizens of Beijing joined together to repel the Army. They used burned-out buses to create barricades, threw rocks and bricks at the soldiers, and even burned some tank crews alive inside their tanks. Thus, the first casualties of the Tiananmen Square Incident were actually soldiers.
The student protest leadership now facedadifficult decision. Should they evacuate the Square before further blood could be shed, or hold their ground? In the end, many of them decided to remain.
That night, around 10:30 pm, the PLA returned to the area around Tiananmen with rifles, bayonets fixed. The tanks rumbled down the street, firing indiscriminately.
Students shouted “Why are you killing us?” to the soldiers, many of whom were about the same age as the protesters. Rickshaw drivers and bicyclists darted through the melee, rescuing the wounded and taking them to hospitals. In the chaos,anumber of non-protesters were killed as well.
Contrary to popular belief, the bulk of the violence took place in the neighborhoods all around Tiananmen Square, rather than in the Square itself.
Throughout the night of June3and early hours of June 4, the troops beat, bayoneted, and shot protesters. Tanks drove straight into crowds, crushing people and bicycles under their treads. By6a.m. on June 4th, 1989, the streets around Tiananmen Square had been cleared.
“Tank Man” or the “Unknown Rebel”
The city lapsed into shock during June 4, with just the occasional volley of gunfire breaking the stillness. Parents of missing students pushed their way to the protest area, seeking their sons and daughters, only to be warned off and then shot in the back as they fled from the soldiers. Doctors and ambulance drivers who tried to enter the area to help the wounded were also shot down in cold blood by the PLA.
Beijing seemed utterly subdued the morning of June 5. However, as foreign journalists and photographers, including Jeff Widener of the AP, watched from their hotel balconies asacolumn of tanks trundled up Chang’an Avenue (the Avenue of Eternal Peace), an amazing thing happened.
A young man inawhite shirt and black pants, with shopping bags in each hand, stepped out into the street and stopped the tanks. The lead tank tried to swerve around him, but he jumped in front of it again.
Everyone watched in horrified fascination, afraid that the tank driver would lose patience and drive over the man. At one point, the man even climbed up onto the tank and spoke to the soldiers inside, reportedly asking them, “Why are you here? You have caused nothing but misery.”
After several minutes of this defiant dance, two more men rushed up to the Tank Man and hustled him away. His fate is unknown.
However, still images and video of his brave act were captured by the Western press members nearby and smuggled out for the world to see. Widener and several other photographers hid the film in the tanks of their hotel toilets, to save it from searches by the Chinese security forces.
Ironically, the story and the image of the Tank Man’s act of defiance had the greatest immediate effect thousands of miles away, in Eastern Europe. Inspired in part by his courageous example, people across the Soviet bloc poured into the streets. In 1990, beginning with the Baltic states, the republics of the Soviet Empire began to break away. The USSR collapsed.
Nobody knows how many people died in the Tiananmen Square Massacre. The official Chinese government figure is 241, but this is almost certainlyadrastic undercount. Between soldiers, protesters and civilians, it seems likely that anywhere from 800 to 4,000 people were killed. The Chinese Red Cross initially put the toll at 2,600, based on counts from local hospitals, but then quickly retracted that statement under intense government pressure.
Some witnesses also stated that the PLA carted away many bodies; they would not have been included inahospital count.
The Aftermath of Tiananmen 1989
The protesters who survived the Tiananmen Square Incident metavariety of fates. Some, particularly the student leaders, were given relatively light jail terms (less than 10 years). Many of the professors and other professionals who joined in were simply blacklisted, unable to find jobs. A large number of the workers and provincial people were executed; exact figures, as usual, are unknown.
Chinese journalists who had published reports sympathetic to the protesters also found themselves purged and unemployed. Some of the most famous were sentenced to multi-year prison terms.
As for the Chinese government, June 4, 1989 wasawatershed moment. Reformists within the Communist Party of China were stripped of power and reassigned to ceremonial roles. Former Premier Zhao Ziyang was never rehabilitated and spent his final 15 years under house arrest. Shanghai’s mayor, Jiang Zemin, who had moved quickly to quell protests in that city, replaced Zhao as the Party’s General Secretary.
Since that time, political agitation has been extremely muted in China. The government and the majority of citizens alike have focused on economic reform and prosperity, rather than political reform. Because the Tiananmen Square Massacre isataboo subject, most Chinese under the age of 25 have never even heard about it. Websites that mention the “June4Incident” are blocked in China.
Even decades later, the people and the government of China have not dealt with this momentous and tragic incident. The memory of the Tiananmen Square Massacre festers under the surface of everyday life for those old enough to recall it. Someday, the Chinese government will have to face this piece of its history.
Foravery powerful and disturbing take on the Tiananmen Square Massacre, see the PBS Frontline special “The Tank Man,” available to view online.
Roger V. Des Forges, Ning Luo, Yen-bo Wu. Chinese Democracy and the Crisis of 1989: Chinese and American Reflections, (New York: SUNY Press, 1993)
PBS, “Frontline: The Tank Man,” April 11, 2006.
U.S. National Security Briefing Book. “Tiananmen Square, 1989: The Declassified History,” posted by George Washington University.
Zhang Liang. The Tiananmen Papers: The Chinese Leadership’s Decision to Use Force Against Their Own People – In Their Own Words,” ed. Andrew J. Nathan and Perry Link, (New York: Public Affairs, 2001)
နီ နေဇင်လတ်တဘဲ့ မဘသသိမ်းဆိုး ဘော်သာ ဖျဲသီးမ လား၊ တေဖီမှက်ထာ